Al-shabaab oo la wareegay deegaanka Afurur ee gobolka Bari – Radio Daljir
Al-shabaab oo la wareegay deegaanka Afurur ee gobolka Bari
Luulyo 20, 2018 9:57 b 0
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Af-urur ee gobolka Bari ayaa sheegaya in halkaasi ay lawareegeen Saaka waabarigii kooxda Al-shabaab sida ay Warbaahitooda ku hadashay afka Al-shabaab ay ku soo qoreen..
Ciidamadii ku sugna Deegaanka Af-urur ayaa lagu soo waramayaa in ay ka baxeen bariisinkii ay ku lahaayeen Deegaanka.
Wararka ayaa istaasi ku daraya in goob fagaare ah ay kula hadleen Al-shabaab dadka deegaanka .
Lama oga ilaa iyo hada in ay Al-shabaab dad ku dileen Deegaanka iyo inkale ,waxaana la ogayn sababta ay Ciidamada uga baxeen deegaanka Af-urur.
Wararka aan halayno ayaa sheegaya in Ciidamo Gurmad ah ay ka baxeen saaka Magaalada Bosaaso ,mana jirto wax war ah oo ka soo baxay Saraakiisha Ciidamada Puntland iyo Maamulka Gobolka Bari ,iskuday badan oo aan la samaynay Maamulka Gobolka ayaan noo suurta galin in ay Tel foonka ka jawaabaan .
Sanadkii 2017kii ayay ahayd markii ay Al-shabaab sidan oo kale ay soo weerareen Saldhig Ciidamada Puntland ay ku lahaayeen Deegaankaasi waxaana Weerarkaasi ku dhintay ilaa 61 Askari.
Af Urur waxa ay saldhig u tahay ciidamada Daraawiishta ee ku sugan buuraha Galgala, waxayna 105 km koonfur galbeed kaga beegan Magaalada Boosaaso ee xarrunta Ganacsiga Puntland.